कांग्रेस सांसदको कटाक्ष,‘नेपाल प्रहरीको नाम फेरेर नेकपा प्रहरी राखौँ’ – Nepal24Hours.com – Integration Through Media ….!
२३ जेष्ठ २०७७, शुक्रबार १२:०९ English
कांग्रेस सांसदको कटाक्ष,‘नेपाल प्रहरीको नाम फेरेर नेकपा प्रहरी राखौँ’
काठमाडौँ, २९ भदौ । संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदले नेपाल प्रहरीको कार्यकौशलता र क्षमतामाथि नै प्रश्न उठाएका छन् । आइतबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा कांग्रेस सांसद डा. अमरेश सिंहले नेपाली कांग्रेसका नेता कार्यकर्ता नेकपाबाट कुटिदा नजिकै भएको प्रहरी रमिते बनेको आरोप लगाए ।
भदौ २६ गते बाँकेको खजुरामा कांग्रेस कार्यकर्तामाथि नेकपा कार्यकर्ताबाट भएको आक्रमणमा घटनास्थलमै रहेको प्रहरीले केही गर्न नसकेको भन्दै उनले आपत्ति जनाए । सांसद डा. सिंहले कटाक्ष गर्दै नेपाल प्रहरीको नाम फेर्न सरकारलाई भने । ‘नेपाल प्रहरीको नाम अब नेकपा प्रहरी राखौँ’ उनले भने ।
२९ भाद्र २०७६, आईतवार १४:४७ मा प्रकाशित